Ntinye aka na mkparịta ụka iji belata ịda mbà n'obi na nchegbu - Ọzụzụ Nghọta
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » MKpọnwụ » Ntinye aka na mkparịta ụka iji belata ịda mbà n'obi na nchegbu
Ọrịa ọ bụ otu n’ime ihe na - akpata ọnwụ na nkwarụ na ndị tozuru etozu n ’ụwa niile. Maka na ọ na-eme na mberede, nsonazụ ya na ndụ ndị mmadụ yana ọdịmma mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-abụkarị mbibi. Anyị nwere ike ịkọwa ihe ọdịmma psychosocial dị ka ọnọdụ afọ ojuju, echiche onwe onye nke nnabata onwe, mmetụta nke ịba uru na ntụkwasị obi na ikike mmadụ. Netwọk nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, echiche na akparamagwa bụ ihe nwute na-emetụta ihe omume ndị na-esochi ọrịa strok, na-atụgharị ụjọ na ịda mba.
Dị ka atụmatụ si kwuo, ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị lanarịrị ọrịa strok na-akọ obi mgbawa, na akụkọ 20% nchekasị post-stroke. Njupụta nke ịda mbà n'obi post-stroke ka dị elu, na-adịgide ọbụna afọ 5 mgbe ihe omume gasịrị. Nsogbu psychosocial nwere mmetụta dị mkpa na ndụ ma belata arụmọrụ nke ọrụ ndozi.
N'oge gara aga ekwenyere na mmemme ndị ezubere iche nwere ike imeziwanye ọdịmma psychosocial; dị mwute ikwu na, na-egosi na-egosi mgbe mgbe na-abụghị. Otú ọ dị, n’otu isiokwu e bipụtara na 2020, Kildal Bragstad na ndị ọrụ ibe  tụpụtara a ntinye aka dabere na mkparịta ụka iji kwalite ọdịmma psychosocial.
Ebumnuche bụ iji nyochaa ịdị irè nke ọgwụgwọ na ọdịmma mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke isiokwu 12 ọnwa mgbe ọrịa strok gasịrị. Maka ọmụmụ ihe, a họọrọ ha Ndị okenye 322 nwere ọrịa strok na nso nso a (Izu 4), etinyere na otu nnwale na njikwa. Ndị otu nyocha ahụ sonyere na nkeji asatọ 60-90 nkeji asatọ n'ime ọnwa isii mbụ nke ọrịa strok ahụ.
Anakọtara data metụtara ọdịmma mmekọrịta mmadụ na ibe ya ajụjụ (Ajụjụ Ahụike Ahụike-28, Stroke na Aphasia Ogo Ndụ Ndụ-39g, Sense of Coherence n'ọtụtụ e Yale Brown otu akwụkwọ) na izu 4-6, na ọnwa isii na ọnwa iri na abụọ mgbe ọrịa strok gasịrị.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Nsonaazụ ọnya cortical na nwata na nkà ọgụgụ isi na mmụta ụlọ akwụkwọ
I pụta nke nchọpụta a egosighi ọdịiche dị n'etiti ọdịmma mmekọrịta mmadụ na ibe nke isiokwu abụọ ahụ na ọnwa 12. N'ihe banyere mmetụta na ndụ, enwere ike ịhụ n'oge arụmọrụ nke, agbanyeghị, edoghị ya ọnwa iri na abụọ mgbe ọnya ahụ gasịrị.
Site na ọmụmụ ihe mbụ a enwere ike kwubie na, agbanyeghị na enwere ike ịme nyocha ndị ọzọ na mpaghara a, Enweghị ọnọdụ n'oge a iji kwado mkparịta ụka nke mkparịta ụka iji belata nkụda mmụọ na ọnọdụ nchegbu nke ndị ọrịa strok.
 Bragstad LK, Hjelle EG, Zucknick M, et al. Mmetụta nke itinye aka na mkparịta ụka iji kwalite ọdịmma psychosocial mgbe ọrịa strok gasịrị: usoro nchịkwa a na-achịkwa. Nlekọta Ahụike. 2020;34(8):1056-1071.
Anyị ngwa ngwa mmekọrịta na ngwa aphasia anyị
Ọrịa isi na ọnya isi: mgbakwunye ọgbụgba ndụ na - egosi
Ọrịa cognitive n'ihi mmerụ ahụ ụbụrụ
aphasia, nchegbu, ọdịmma psychosocial, ịda mbà n'obi, ọrịa strok
Ntinye aka na mkparịta ụka iji belata ịda mbà n'obi na nchegbu2020-09-122020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/09/depressione-post-ictus.png200px200px